Waxa uu dareensan yahay inay bandhig weyn iPhone ka hor dadka kale, ugu yaraan ogaaday naxdinta badan kooxaha ay had iyo jeer dadka isticmaala! Dagaal la dhibaatooyinka keyboard waa wax ku cusub kuwa isticmaalaya iPhone laakiin wax naxdinta leh waxay tahay in Marlon kuwaas oo u baahan in la xaliyo ugu horeyn waaba intaasoo ay keeni karaan dhib badan si ay qalabka. Mar kasta oo aan mar walba maqallaa ku saabsan Apple qaar ka mid ah model cusub u badan si ay ugu faraxsan oo sawaxanka ah oo dhan sii daayo. Dabcan waxaa jira wax iibsiga sare oo cusub oo la mid ah, mid ayaa rajeynaya in cayayaanka caadiga ah ee gmail, haddii aanu mar kale soo baxaan. Mid ka mid ah Marlon ugu qatarsan waa in keyboard ah, kaas oo haddii aan qabto si sax ah karnaa qalabka aan waxtar lahayn.
Dhibaatooyinka caadiga ah iPhone keyboard iyo xalalka
Wixii aqoonta galido, waa muhiim in aad eegtid dhow dhibaatooyinka keyboard weyn ka iPhone, iyadoo aan loo eegin nooca model ama tilmaamaha gaarka u ah. Tiro yar ayaa la koobay sida hoos:
• button Home aan shaqayn
Marka button guriga ku fashilanto in ay si fiican u shaqeeyaan, dadka isticmaala wax weyn oo raaxo la kulmaan. Iyada oo dad badan oo sheegaya in dhibaato ayaa aasaasiga ah tan iyo gadashada iyo kuwa kale oo yar oo ay soo sheegaan dhibaatooyinka ka dib isticmaalka filan. Haddii bedelay barnaamijka AqoonMaal, ma aha in aad maskaxdaada, ka dibna waxaa jira xal aad qaadi karto si loo dalxiis tago. Si fudud booqo goobaha> guud> helitaanka> xiriiri caawiya oo u celi on.
• Arrimaha makiinada la warqado gaar ah sida 'S' iyo 'P'
Typos waa caadi in dadka isticmaala inta badan oo eedeyn badhamada "P" iyo "Q" inta badan. Inta badan, button backspace sidoo kale halkan u keentay dhibaato. Guud ahaan, furaha Kuwaan waxa ay ku dhegeen iyo natiijada ay tahay warqado badan aad ku qortay, taasi oo markii dambe uu gebi ahaanba tirtiro. Si aad natiijo sax ah, dadka isticmaala badan soo goosateen in faa'iidooyinka ka dib isagoo intaa ku daray in ay soo go'ay a iPhone. Ma aha oo kaliya ay yihiin qaladaad la characters soo noqnoqda yareeyo laakiin xitaa arrimaha sida fariin oo dhan is tirtirayaa off waxaa gebi ahaanba cirib tiri.
• qaboojiyay ama keyboard kaliftay
In kasta oo ay dadaal fara badan ku qaadan iPhone ka dib in ay avatar caadi ah, oo aad ka heli isku day in aad ku guuldareysatay. Tani waa marka telefoonka ilaa uu si buuxda u xiran. Xaaladdan oo kale aad, riixi kartaa oo qaban batoonka oo ay la socdaan muhiim ah guriga ilaa aad ka arki logo Apple ah. Tani waxay ka caawisaa in rebooting qalabka.
• keyboard gaabis ah
Waxaa la yaab leh sida ay iPhone cusub ayaa noqotay saadaal ah in doorashada text ama marka aad dooranayso bedelay autocorrect. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xarumo taageero ku daray u Customization keyboard buuxa, taas oo ka mid ah rakibidda qaybo 3aad teebabka, sida Swype. Maxaad samayn kartaa waa ay tagaan goobaha> guud> dib loo hormariyo dictionary keyboard dib.
• Awood diro oo la helo fariimaha qoraalka ah
Maxaad SMS es sida? Tiro ka mid ah barnaamijyadooda Fariin sida iMessages ama awood u leh inay soo diro sawirada, videos, fariimaha codka iyo wixii la mid ah, oo aan haysan si dib u soo bedelan inta lagu jiro codsiyada waa dhibaato guud oo la kulmay by isticmaala iPhone. Dabcan, xoogaa fariinta dhibaato kale oo iPhone, weli waa mid ka mid bixiyo xaqiiqada ah waa ka dib oo dhan, cillad ah oo ku saabsan qayb ka mid keyboard dareenka. Waxaad mar kasta u tagi kartaa doorasho iMessage ka baxsan oo taga si qayb ka mid ah SMS ka ikhtiyaar fariinta hoos goobaha dib. Si kastaba ha ahaatee, ka fiiri si aad u aragto haddii ay dhibaato hore oo aan soo if been in ee asalka u ah dhibaato.
• Leeds General
Haddii aan kor ku xusan, Artur guud ee keyboard iPhone waa arin caan ku ah dad badan, gaar ahaan waqtiga aad qortid codsiga SMS ah. Haddaba haddii dhibaatada ka dhacdaa yara inta ugu badan, xal yar shaqeyn karaan yaabab,
-Checking Ah iPhone la updated
-Haddii ay dhibaatada sii socoto, waxa lagu xalin karaa soo celinta iPhone in ay goobaha warshad.
Talooyin iyo tabaha ku saabsan isticmaalka keyboard iPhone
Hel fikrad ku saabsan tuuryo yar, Talooyin iyo tabaha in ay dhacdo helidda aad keyboard iPhone idin siinayo waqti adag:
• Ku dar luqad caalami ah
• punctuations Insert
• Ku dar magacyada saxda ah si ay u qaamuuska
• .com Change in domains kale
Dib u celi qaamuuska
Isticmaal tuuryo xukun-joojinta
Qof Display tiriyaa in farriimo
Beddel noocyada in qoraalo
Si dhakhso ah ku darto calaamad gaar ah
Delete qoraalka isticmaalaya gacanta ku tilmaam
Kuwan oo dheeraad ah, dhibaatooyin keyboard iPhone laga yaabaa in ay hoos u ilaa xad ah. Si kastaba ha ahaatee, baaritaan caafimaad ah oo dukaan ka iPhone ku kalsoon tahay haddii ay jirto innaba dhammaad ma dhib ah.
Sidee Apple qiimaha doonaa iPhone Cusub?
Sida loo hagaagsan iPhone in New Computer Dhammaataan
> Resource > iPhone > Solutions Full Dhibaatooyinka keyboard iPhone